PewDiePie's Tuber Simulator 1.47.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.47.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ PewDiePie's Tuber Simulator
PewDiePie's Tuber Simulator ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
PewDiePie ရဲ့ဥ Simulator ၌သင်တို့၏အလွန်ကိုယ်ပိုင်အိတ်ကပ်ဥဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်, အကြီးမားဆုံးအင်တာနက်ကြယ်တ PewDiePie များခြေရာအတွက်လိုက်နာပါ! သင်တို့သည်နောက်ကာလ၌အစဉ်အမြဲတည်အကြီးမားဆုံး, baddest ဥဖြစ်လာမိမိပလ္လင်တော်ထဲကထွက် PewDiePie ကန်ကြမည်နည်း
ဒီ 2.5D isometric retro style အမျိုးမျိုးဂိမ်းထဲက Find!
⋆ဗွီဒီယိုနဲ့ရရှိ VIEWS နှင့်ငုပ်သင်္ဘောထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိရိယာများ, ပရိဘောဂ, အဝတ်အစားနှင့်ပင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်အသစ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်စေ!
⋆လျင်မြန်စွာငွေကြေးရဖို့ EPIC Quest ပြီးဆုံး!
အွန်လိုင်းကမျှဝေခြင်းအားဖြင့်သင့် Awesome နေရာထိုင်ချွတ်ပြ⋆!
⋆ WEEKLY အဖွစျအပကျြထဲမှာသူတို့အဘို့အသင်အကြိုက်ဆုံးကစားသမားများနှင့်မဲကျသကေို!
⋆သူငယ်ချင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပါနှင့် SWAG လက်ဆောင်များပေးပို့သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိ!
⋆ PUGGLE, အစဉ်မပြတ် cutest minigame PLAY!
PEWDIEPIE မှပြန်လာသော RUSHJET1 အားဖြင့်⋆အံ့သြစရာချစ်ဂီတတေးဂီတ: THE BROFIST ၏ဒဏ္ဍာရီ!
© 2016 Outerminds Inc ကိုအားလုံးအခွင့်အရေး။
PewDiePie's Tuber Simulator အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PewDiePie's Tuber Simulator အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PewDiePie's Tuber Simulator အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
PewDiePie's Tuber Simulator အား အခ်က္ျပပါ
PewDiePie's Tuber Simulator ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PewDiePie's Tuber Simulator အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.47.1
ထုတ်လုပ်သူ Outerminds Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://outerminds.com/Legal
App Name: PewDiePie's Tuber Simulator
File Size: 279.09MB
Release date: 2019-09-10 18:05:19
လက်မှတ် SHA1: 0C:92:6A:1E:EA:E1:A9:14:E0:8E:D0:FF:D4:FF:5F:67:06:48:48:02
အဖွဲ့အစည်း (O): Outerminds Inc.
PewDiePie's Tuber Simulator APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ